Sarudzo yemanoveli erudo: Kubva kuAusten kuenda kuEsquivel | Zvazvino Zvinyorwa
Sarudzo Yakanakisa yeRudo Novels: Kubva kuAusten kuenda kuEsquivel
Kwemakore, makumi emakore uye mazana emakore, munhu anga achikwanisa kuwira murudo kuburikidza nemapeji ebhuku rakanakisa. Uye ndezvekuti mabhuku agara ari ehunyanzvi azvino izvo, pamwe, zvakagadzirisa manzwiro erudo senge chero rimwe, rimwe chairo sekurota kwatinofunga kuti tiongorore zvekare kuburikidza zvinotevera kusarudzwa kwenyaya dzerudo kubva kuActualidad Literatura.
1 Kuzvikudza uye Kusarura, naJane Austen
2 Semvura yechokoreti, naLaura Esquivel
3 Runyerekupe rweSurf, naYukio Mishima
4 Wuthering Heights, naEmily Brontë
5 Jane Eyre, naCharlotte Brontë
6 Seda, naAlessandro Baricco
7 Kuenda Nemhepo, naMargaret Mitchell
8 Rudo munguva yekorera, naGabriel García Márquez
9 Romeo naJuliet, naWilliam Shakespeare
Kana paine bhuku rerudo, zviri pachena kuti rakanakisa basa raAusten. Rakadhindwa muna 1813, Kuzvikudza uye Kufungira zvisizvo zvaireva chete kutaridzika kweimwe yemakomedhi ekutanga erudo munhoroondo yezvinyorwa, asi kurovedza muviri mukukadzi uye kugonesa kuburikidza nemaziso e protagonist, Elizabeth bennet. Mukadzi wechidiki uyo, kusiyana nedzimwe hanzvadzi dzine shungu dzekuroorwa nemurume akapfuma, anosarudza kuramba achiongorora manzwiro ake, kunyanya panopinda VaDarcy. Iri rakasarudzika basa rine 2005 inoenderana naKeira Knightley iyi nyaya inotapira sekukosha kwayakaita yakasimudzwa zvakatonyanya kuOlympus.
Unogona kuzvitenga pano
Semvura yechokoreti, naLaura Esquivel
Apo vazhinji vakafunga kuti iyo mashiripiti echokwadi Yakanga yadzoserwa kuzera rayo regoridhe muma60s uye 70s, wekuMexico Laura Esquivel akasvika neinozha yerove muna 1989 iyo yaizobatsira kumutsidzira mashiripiti weiyi anowanzo Latin American genre. Gara mune hacienda yeMexico muPiedras Negras panguva yeMexicoan Revolution, Como agua para chokoreti kuverenga nyaya yerudo yaTita, gotwe pavanasikana vatatu (uye nekudaro akamanikidzwa kugara mukuchengetwa nevabereki vake) naPedro, akavimbisa hanzvadzi yaTita. Zvese izvi, zvakaputirwa nezvinonhuwira zvinomutsa gastronomy yeMexico kupfuura zvazvazvino munhoroondo, iyo yaive nayo chikamu chechipiri, dhayari raTita, rakabudiswa muna 2016.
Runyerekupe rweSurf, naYukio Mishima
Imwe ye zvinyorwa zvitsva yemunyori ino yakaiswa kure, kure kure, zvakanyanya mu chitsuwa chidiki muzvitsuwa zveOkinawa, kuJapan, uko kwakajeka uye nekubudirira. Chiitiko chedetembo che toris, masango uye varedzi mune iyo yerudo nyaya yevechidiki vaviri kuti ivo vanofanirwa kurwa vachipesana netsika dzemagariro uye nemamiriro avo aripo munzvimbo dzenyika. Prose yakachena uye rondedzero kubva muruoko rwemhare Mishima, iye mumwe wevanonyanya kupokana vanyori vezana ramakumi maviri.
Wuthering Heights, naEmily Brontë
Muna 1847, kuti mukadzi ave iye munyori wenyaya yakanga isiri chokwadi chinogamuchirwa munharaunda.. Ichi ndicho chikonzero chikuru chaizotungamira Emily Brontë kuburitsa Wuthering Heights pasi pemanyepo Ellis Bell. Izvo zvaaisatarisira ndezvekuti ichi chichava chimwe cheakakura echinyakare munhoroondo yeChirungu zvinyorwa. Chimiro chayo chitsva uye nyaya yerudo uye kuda, kweruvengo uye kutsiva, zvaive zvakakwana kukwidziridza basa rehanzvadzi yemunyori mumwechete we ...
Hongu, hanzvadzi yaEmily akatipawo imwe yenyaya dzinowedzera kune chero Sarudzo yenyaya dzerudo, kunyanya Jane Eyre. Zvakare yakaburitswa muna 1847, ino nguva pasi pekunyepedzera Currer Bell, Jane Eyre anofukidza hupenyu hwemukadzi wechidiki uyo mushure mehucheche akarererwa mumusha wevasikana anosarudza kuve mutungamiriri wemhuri yaVaRochester, ndiani achawira murudo na. Pasina kupokana, imwe yeiyo dzakanakisa dzerudo dzenhau nguva dzese, yakashandurwa kanoverengeka kune hombe skrini.
Seda, naAlessandro Baricco
Rakaburitswa muna 1996, Seda yakava budiriro huru yekubuditsa nekutenda kune basa rakanaka remunyori waro, weItaly Baricco. Iyo nyaya yakaiswa muzana reXNUMXth century, kunyanya mune yekumwe nyika yeJapan, umo Vanosangana nemushambadzi wechiFrench anonzi Hervé Joncour, vachitsvaga makonye epa seine ekuti vape indasitiri yemachira mutaundi rekwavo, uye muJapan asinganzwisisike. asinganzwisisi mutauro wako. Nhoroondo pfupi inofadza chero munhu anoda kufamba neshuga yakawedzera.
Kuenda Nemhepo, naMargaret Mitchell
Inofungidzirwa seimwe ye mabhuku akatengwa zvakanyanya munhoroondo, Gone with the Wind rakaburitswa muna 1936 uye rakava rinotengesa zvakanyanya, nekuda kwechikamu kune mukurumbira wemunyori waro, Margaret Mitchell, mumwe wevakadzi vekutanga kuve nekoramu yake mupepanhau kumaodzanyemba kweUnited States. Iyo yaitozivikanwa kune vese rudo-ruvengo nyaya pakati paScarlet O'Hara naRhett Butler pakati peAmerican Civil War Kwete chete iyo yakawana Mitchell muPulitzer, asi yaizokurudzira kuchinjika kwakaburitswa muna 1939 ikashanduka ikava chimwe chezvigadzirwa zvakaomarara munhoroondo yemamuvhi.
Rudo munguva yekorera, naGabriel García Márquez
Mumashoko aGabo pachake, nderipi raive basa rake raanofarira rakauya muna 1985 nekukasira kuve rimwe remabhuku anonyanyo rumbidzwa emunyori weAne Makore Mazana eSolitude. Gara muguta remahombekombe muColombia (ingangodaro Cartagena de Indias), iyo nyaya inotaurira seye protagonist na iyo love Triangle yakaumbwa nemuchato waFermina Daza naJuvenal Urbino, naFlorentino Ariza, murume anopenga murudo naFermina kubva panguva yaakasangana naye. Nhoroondo yakasarudzika iyo, nekuda kwekuguma kwayo kusingagadzirisike, inokodzera kuverengerwa kamwe chete muhupenyu.
Romeo naJuliet, naWilliam Shakespeare
Hongu, tinoziva. Romeo naJuliet haisi ngano yakajairika, asi kusingaisanganisira sedombo rekunyora mune iyi sarudzo yemanyorerwo erudo kungave kuzvidza. Yakafungidzirwa sedambudziko muna 1597, iyo nyaya yerudo pakati paRomeo, mwanakomana weMontagues, naJuliet, mwanasikana wevaCapulets, muItaly Verona Haisi chete chikamu chenhoroondo dzetsamba, asi yenyaya yerudo yakapihwa kwemazana emakore nekuda kwebasa raShakespeare mukuru.
Ndeipi nyaya iwe yaungawedzera pane yedu sarudzo yemanyorero enganonyorwa? Chii chaunofarira pane ese akataurwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Sarudzo Yakanakisa yeRudo Novels: Kubva kuAusten kuenda kuEsquivel
Mhosva dzekupara mhosva muSpain: chirongwa chemwedzi wega wega wegore.